Myanmar Gays Heaven: Ko Kyaw Oo
Posted by Myanmar Gays Heaven at 3:15 AM
chon June 8, 2013 at 10:42 PM
ကို​ကျော်​ဦးဖုန်းနံပါတ်​ကအမှန်​လား ခံချင်​လို့ပါ မုံရွာကပါ မိန်းမမဆန်​ပါဘူး အဆင်​​ပြေမလား
Monywa ကဆိုရင် ph no ချန်ထားခဲ့ပါ
တကယ်​လိုးချင်​တယ်​ဆိုရင်​ ဆိုင်​တဆိုင်​ချိန်း​လေ လာခဲ့မယ်​
hmkokomdy2011@gmail.comadd လိုက်ပါ monywa ကပဲ ok!
STM October 5, 2013 at 9:47 AM
မုံရွာက ဆိုတဲ့သူကို လိုးချင်ပါတယ် ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့ပါ
1/1 ဆိုရင်ph no:ပေးမယ် ခြောက်ရင်မကြိုက်ဘူး
Anonymous June 21, 2013 at 2:56 AM
last ngt, I sent my cock photos with heading "my big lee"
Have u received that photos?
( ရန်ကုန် - သီးသန့် )
လူပျို Top Only ပါ
ပိုကြိုက်တယ် ၊ မိန်းမမဆန်လည်း
Offer ဆိုပေမယ့် ကြိုက်တဲ့သူမှလိုးပေးတယ်
အသက်က ၂၃ ၊ အရပ် ၅ ပေ ၈ လက်မ ၊
၀ိတ် ၁၃၇ ပေါင်၊ လီးက ၆ လက်မပိုပို ၊
ဖြောင့်တယ်၊ တုတ်တယ် ၊ အသားနဲနဲဖြူတယ် ၊
မပိန်ဘူး မ၀ဘူး ရုပ်အသင့်အတင့်ရှိတယ်
i wanna offer to u
but i from shan state
can u come to me?
may i know ur phone no?
may i know your phone no
Plz give me ph no
kkochitthu458 September 13, 2013 at 12:21 AM
i want to be suck and fuck
i m two way
live at Pyin o lwin and taungoo
study at Engineer(3rd)
i also too v
how i contact to u
realright.176@gmail ko add lite par.ph no say mal
အလကားလိုးပေးမှာပါl like man to manကြိတ်ပုံးများကိုပိုလိုးချင်သည်မနွဲ့လေပိုကြိုက်လေပဲလူသိမခံချင်လို့ပါ
၀၉၄၂၂၄၅၇၃၆၅ ကို massage or viber နဲ့ အရင်ဆက်သွယ်ပါ
hm စစ်စစ်ပါ accထားခဲ့
Katha ka bal thu shi lal
Jasve October 31, 2013 at 1:22 AM
အိုးတောင့်သည် ၀ငနေသည်လိင်တံကို ညှပ်၍၄င်း အပေါမှ စောင့်ခြင်း၎င်း ဇာတ်ကားများထက်ကျွမ်းကျင်စွာခန္ဓာနှင့်လိင်တံကိုပွတ်သပ်ချော့မြူပေးသပ်၍ လိင်တံကိုလျှာဖြင့်အမျိုးမျိုးကလိ၍၍ဘောကိုငုံပေးခြင်း ခရုစုပ်သကဲ့သို့ သုက်မထိန်ူနိုင်လောက်အောင်ှုတ်ပေးတတ်ပါသည် အထူးလိငသာယာစေသောဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းကိုပေးဆောငနိုင်ပါသည်ယခုပင်သင့်လိင်တံတောင်နေပြီမလား I နဲ့တွေ့တဲ့ခါသင်မစဉ်းစားထားသောလိင်ဝန်ဆောင်မှုရနိုင်ပါသည်
မှုတ်ချက်-I သည bottom butအခြောက်မဟုတ်ပါ အခြောက်မ များနဲ့လဲမတွေ့လိုပါ် to contact ph no.09400021660 n viber also,Ve Ve Singh is my fb,I'm in 21 from MYITKYINA
john love November 2, 2013 at 5:27 PM
Anonymous November 16, 2013 at 8:19 AM
wai yan February 17, 2014 at 6:24 AM
ခံကြည့်ချင် တယ် 0936067568 ကိုဆက်လို့ရပါသည်viber သုံးပါသည်
မြောက်ဥကလာကပါ ၀၉၂၅၀၅၈၁၄၂၀ မိန်းမဆန်တာမကြိုက်ပါ ကိုနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်
Peter König October 26, 2014 at 8:14 PM
တလှည့်စီ စိတ်ဝင်စားရင် ဖုန်ခေါ်လိုက် yg က
လိးက ခြောက်လက်မ အလိုးကြွမ်းတယ်
Thar Nge August 29, 2015 at 11:18 AM
mandalay ကပါ 69 လုပ်ချင်ပါတယ်ဆက်သွယ်ပါ
09797753431 ပါဗျ အစဉ်ပြေရင်အမြဲဆွဲချင်တယ်
Anonymous September 24, 2015 at 11:58 AM
မန်းလေးကပါ m2m လုပ်ချင်တယ် ၀၉၇၉၈၈၆၇၉၁၂ဆက်ပါ
min khant moe October 1, 2015 at 8:18 AM
min khant moe October 1, 2015 at 8:19 AM